Yemen, Abyan iyo Shabwa - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Refugee boat at the coast of Yemen © MSF
Yaman waa dal tiro badan oo qaxooti iyo muhaajiriin ah martigeliya ama ay sii maraan. Dadkan oo ka soo cararaya iskahorimaad, saboolnimo iyo degganaansho la’aan, ayaa waxa ay galaan safarro halis ah oo ay doonyo ku raacaan, nafahooda ayaa ay halis geliyaan iyaga oo isu dhiibaya tahriibiyeyaal. Bishii Sebtembar 2007dii ayaa Médecins Sans Frontières (MSF) waxa ay shaqo ka bilowdey koonfurta Yaman, iyada oo gargaar caafimaad iyo mid bani’aadimnimo siineysa qaxootiga iyo muhaajiriinta ka imanayey Geeska Afrika. Daryeelka caafimaadka ee ay bixinayeen ka sokow, kooxaha MSF waxa ay dunida u soo bandhigeen safarka halista ah ee looga soo gudbayey Gacanka Cadmeed waxaana ay u qareemeeyeen in dhug loo yeesho iyo in gargaar bani’aadamnimo loo helo dadka cusub ee imanayey.
Muddadii u dhaxaysay Sebtembar 2007 ilaa Maarso 2010, MSF waxa ay gargaartey in ka badan 25,000 oo qof oo ah dad dhowaan ka soo degey xeebaha gobollada Abyan iyo Shabwa ee dalka Yaman. Wakiillo bulshada deggan xeebaha ka tirsan ayaa marka ay doomuhu yimaadaan soo wargeliya kooxaha MSF. Ka dib kooxo wareega ayaa u baxa xeebta si ay u bixiyaan gargaar caafimaad oo degdeg ah iyo mid nafsaani ah, iyo weliba cunto iyo biyo iyo xirmooyin ay ku jiraan dhar iyo alaabada fayadhowrka loo isticmaalo. MSF waxa ay sidoo kale gacanta ku haysaa qaybta caafimaadka ee Xarunta Dadka Lagu Qaabilo ee Axwar, halkaas oo dadka cusub ee dhowaan yimid lagu diiwaan-geliyo oo ayna joogi karaan ayna ku nasan karaan maalmo si ay uga soo kabtaan safarkii rafaadka badnaa. Kooxaha MSF waxa ay sidoo kale ka hawshiisa wadaan qolka xaaladaha degdegga ah ee cusbitaalka Axwar.
Xarunta Dadka Lagu Qaabilo ayaa kooxaha MSF ay dadka cusub ee markaa yimid ku baarayeen ayna kuwa u baahan ku siinayeen gargaar caafimaad iyo la-talin nafsaani ah. Xanuunada ugu badan ee laga heley dadkaas waxa ay ahaayeen jir-xanuun, madax-xanuun, dhaawac rabshad/cunfi ka soo gaarey iyo cudurrada maqaarka. Dhammaan xanuunadaasi waxa ay la xiriiraan silicii soo marey intii ay safarka ku soo jireen iyo markii ay soo degayeen. Dhaawacyada rabshadda ka dhashey waxaa ay ka soo gaareen qaraacid ay u geysteen tahriibiyeyaasha. Iyaga oo dhibaatooyin xumi ay ku soo mareen goobihii ay ka yimaadeen iyo intii ay safarka ku soo jireen, ayaa bukaanno badani waxaa ka muuqdey calaamado murugo iyo muraal-dillaac ah oo ay ka mid yihiin dhibaatooyin hurdada ama wax cunista la xiriira iyo qofka oo dareema rajo-dhigid iyo qofka oo naftiisa eedeeya ama la kulma dhibaatooyin xagga dareenka ah sida jir-xanuun, madax-xannuun, qofka oo dareema in ay neeftu ku xirmeyso ama matag. Kooxaha MSF ayaa bixiyey la-talin shakhsi ah iyo mid kooxeedba.
Bishii Juunyo 2008dii ayaa MSF ay daabacdey warbixin loogu magac-darey ‘‘No Choice: Somali and Ethiopian Refugees, Asylum Seekers and Migrants Crossing the Gulf of Aden.’ oo micnaheedu yahay ‘Wax ay kala doortaan ma lahan: Qaxootiga, Magangelyo-doonka iyo Muhaarijiriinta Soomaalida iyo Itoobiyaanka ah ee Soo Goynaya Gacanka Cadan’ dadaalkan iyo dadaallo kale ayaa waxa ay dhaliyeen in ay kiciyaan wacyiga dadka ay arrintan ka qabaan iyo taageerada la siinayo dadka dhowaan yimid – hay’ado badan oo kuwa bani’aadamnimada ah ayaa jooga degaanka waxaana la sameeyey goob dadka lagu qaabilo – in kasta oo aaney weli dad ku filneyn. Isla waqtigaas, waxaa hoos u dhacay tirada dadka ka soo dega xeebaha Gacanka Cadan. Cunsurradaan kala duwan daraaddood, ayaa MSF awood u siiyey in ay howlaheedii ku wareejiso Hay’adda Qaxootiga ee Qaramada Midoobey si ay halkaas uga sii ambaqaaddo.
Wararkii ugu dambeeyay ee Mashrrucyada Abyan iyo Shabwa ee Yemen
04.09.2009 | War-Saxaafadeed, Yemen, Abyan iyo Shabwa
Nayroobi, 23 Abriil, 2009 —Koox wareegta oo Médecins Sans Frontières (MSF) ka tirsan ayaa maydadka 35 qof oo Soomaali iyo Itoobiyaan ah ka heley xeebta Yaman habeenkii ay bisha Abriil…
05.12.2008 | Yemen, Abyan iyo Shabwa
Tahriibiyeyaasha dadka ee waqooyiga bari ee Soomaaliya ayaa goor hore oo saakey ah 114 qof xoog uga soo dejiyey dooni yar oo kuwa kaluumeysiga ah iyada oo mareysa meel u…
Nayroobi, 10 Sebtembar 2008 – Koox hay’adda Médecins Sans Frontières (MSF) ka socota ayaa 8 mayd shaley oo Sebtembar ahayd 9ka ka heley xeebta Wadi Al-Barakin oo dalka Yaman (30…
28.06.2008 | Yemen, Abyan iyo Shabwa
Kumanaan qof ayaa nafahooda halis geliya maalin kasta si ay uga soo gudbaan Gacanka Cadan iyaga oo ka soo baxsanaya iskahorimaad, rabshad/cunfi, abaar iyo saboolnimo. Intii lagu jirey sanadkii 2007dii, ku dhowaad 30,000 qof ayaa soo galey safarkan halista badan si ay Yaman
YEMEN:MSF OO KA HADASHEY XAALADDA RABSHADDA KU DHISAN EE LA SOO GUDBOONAATA KUMANAAN SOOMAALI IYO ITOOBIYAAN AH OO KA SOO GUDBA GACANKA CADAN
19.06.2008 | War-Saxaafadeed, Yemen, Abyan iyo Shabwa
Munaasabaddii ay ku soo bandhigeysey warbixinteedii magaceedu ahaa “Wax ay kala doortaan ma lahan”, ayaa MSF waxa ay ku baaqdey in la kordhiyo gargaarka la siiyo qaxootiga iyo muhaajirinta ka…